ဒီနှစ်လူတိုင်းအတွက် ၁၉၂၀ မှာရှိတဲ့ NYE ပါတီကိုဘာဝတ်ရမလဲ - သတင်း
အဘယ်အရာကိုဒီနှစ်ရှိခြင်းလူတိုင်းရဲ့ 1920 NYE ပါတီမှဝတ်ဆင်ရန်
NYE သည်သင်၏ဆံပင်ကိုဖြိုဖျက်ပြီးကြည့်ရှုရန်စိတ်ဖိစီးနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည် အားလုံး ခရစ္စမတ်ကျော်သင့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများ။ ဒါကြောင့် အကယ်၍ သင်သည်အနည်းဆုံး ၁၉၂၀ ခုနှစ် NYE ပါတီတစ်ခုကိုဖိတ်ကြားမခံရလျှင် မင်း တစ်ခုထားရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျမကျင့်လျှင်နောင်တစဉ်းစားပါ - သင့်ရဲ့ NYE န်းကျင်ဆောင်ပုဒ်ရန်အခြားလျောက်ပတ်သောဆယ်စုနှစ်ရှိပါတယ်သည်အထိအနည်းဆုံးနောက်ထပ်အနှစ် 40 ဖြစ်သွားရပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်သင်သည်ဟောင်းနွမ်းသောစိတ်ဆင်းရဲဖွယ်ကောင်းသောနေ့ရက်များနှင့်ပြည့်နေသောပူဖောင်းများကိုမကိုင်တွယ်နိုင်သည့်အသည်းနှင့်အတူသွားမည်။
ဒီတော့အခုသင် NYE ပါတီရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကိုသိပြီ။ အဓိကမေးခွန်းကတော့မင်းဘာဝတ်ရမယ်ဆိုတာပဲ။ ! ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, နေသမျှကာလပတ်လုံးပေါ်မှာ tassels သို့မဟုတ် sequins ရရှိမယ့်အဖြစ်, တစ် ဦး 1920 1920 ခုနှစ် NYE ပါတီအဘို့, သငျသညျသှားဖို့ကောင်းသောပါပဲ။ ဤတွင်သင်စတင်ရန် (၁၉၂၀) ခုနှစ် NYE ပါတီ၏ Inspo အချို့ဖြစ်သည် (သတိပြုပါ၊ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျောင်းသားအထူးလျှော့စျေးတည်ရှိသည်):
ယောက်ျားတို့၊ မင်းတို့ခေါင်းကိုလှည့်ဖို့အာမခံထားတယ်၊ အဝတ်အစားကောင်းကောင်းဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ထက် sexier ဘာမှမရှိဘူး။ အလေးအနက်ထား, သင်မဝယ်ကြပါလျှင် ဒီအနက်ရောင် Sequin ဝတ်စုံ Blazer, ငါလုပ်နိုင်မှာပါ (အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ချစ်စရာ bralette လေးနဲ့မြင်ယောင်ကြည့်ပါ - ဟုတ်ကဲ့) ။
လူတိုင်းကတစ်ချိန်ကသာဝတ်ဆင်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုခုပေါ်တွင်ပိုက်ဆံရှာချင်သည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဖြစ်သည် ဒီ sequin mini စားဆင်ယင် စံပြပါပဲ။ သင်၏ 1920s NYE ​​ပါတီအတွက်ဒေါက်ဖိနပ်ဖြင့်ဒင်းနစ်အင်္ကျီဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကလပ်သို့သွားရန်စကားပြောသောအ ၀ တ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းဝတ်ပါ။ .ရာဝတီ။
C'mon ဒီအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ Plus အားက uni တစ်လျှောက်လုံးသင်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးလူ့အဖွဲ့အစည်းဘောလုံးနှင့်အချို့သောအလေးအနက်အသုံးပြုမှုကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များက NYE ပါတီဟာမင်းရဲ့အတွင်းစိတ် flapper မိန်းကလေးကိုဆက်သွယ်ဖို့အကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကနည်းနည်းပါးပါးရောထွေးလို့မရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါ တွဲဖက် ဂန္ထဝင်ပါတီအားပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အာမခံချက်ရှိသောခေတ်သစ်လှည့်ကွက်တစ်ခုကိုပေးသည် (ထင်သည်။ ) မင်းရဲ့တင်ပါးတွေကိုလှုပ်ခါလိုက်တဲ့အခါဒီဟာကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ ) ။
သင်တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ကန်တာကနေအများကြီးပြောပြနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီ NYE ကိုသင်ကိုယ်တိုင် ၀ န်ဆောင်မှုမလုပ်ပါနဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ၀ တ်ဆင်ထားတဲ့စေးကပ်သင်တန်းဆရာတွေကိုဘယ်သူမှမမြင်ချင်ကြဘူး။ အဘယ်ကြောင့်ဤအ၌မရင်းနှီးမြှုပ်နှံ အနက်ရောင်ကတ္တီပါ Loafers အစား?
ဘယ်သူကဂရုစိုက်သလဲ - ဒါဆိုရင် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ NYE ပါတီကိုကြည့်ဖို့မင်းကြည့်လို့မရဘူး။ ဒါကဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပဲ။ ဤအတူသင်၏အကြိုက်ဆုံးပါတီစားဆင်ယင်တက် Glam ရေတံခွန် Diamante နားကပ် အခု
အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ ဗီရိုနှင့်အင်တာဗျူးများအတွက်အဆင်ပြေသည် နှင့် စိတ်ကူးယဉ် NYE ပါတီများ။ နှင့်အတူ Plus အား ၎င်း၏တစ်ပြားတစ်ကော်လာ ဒီဟာကအခြေခံကျပေမယ့်ဘာမှမသေချာဘူးဆိုတာသေချာစေပါလိမ့်မယ်။
NYE သည်ညသန်းခေါင်အချိန်တွင်မီးခိုးများနှင့်မီးရှူးမီးပန်းများအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဒါဆိုဘာလို့လဲဆိုတော့ sparkles တွေကိုစောစောစီးစီးယူဆောင်လာပြီးဒီ sexy (သေးတဲ့ chic) ​​ကိုမျက်လုံးပြူးစေပါ။ Star Sequin ကွက်ထိပ် ဒီတစ်ခု။
၁၉၂၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌သင်၏ဝတ်လုံကိုခေါင်းတလုံးခြုံကြည့်ပါ အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်။ နည်းနည်းထပ်မံသွားချင်ပါသလား? သင်၏ ၂၀ အတွင်းလူဆိုးဂိုဏ်းသို့ပို့ရန် Movember နှုတ်ခမ်းမွှေးထည့်ပါ။
ဆံပင်လျှောရာသီ၏လမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ရပြီ, သူတို့နေဖို့ကဒီမှာနေတူသောကြောင့်ကြည့်ရှုသည်။ မင်းရဲ့ဆံပင်ကိုပြန်ချော တစ် ဦး sparkly ဆလိုက်ထည့်ပါ သငျသညျအဝေးညဥ့်ကခုန်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်အဲဒီသန်းခေါင်ယံအနမ်းကိုမပျက်စီးစေမယ့်ဆံပင်မရှိပါဘူး။
အသွင်သဏ္icalာန်တူသောယောင်္ကျားစားဆင်ယင်ဝတ်စုံသည်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုပိုမိုအလေးထားလာစေသည်။ tassels သင့်ရဲ့ Vibe မဟုတ်လျှင်မူကား, ဒီ sequin playsuit အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မလား၊
ယောက်ျားလေးတွေကသာသူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းလူရွှင်တော်စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုရအောင်လုပ်ကြတယ်လို့ပြောတယ် ရော့ခ် chic စက်ချုပ် အရမ်း။ မင်းရဲ့ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် NYE ပါတီပွဲမှာထူးဆန်းစွာရောက်နေတာနဲ့အမျှခိုင်ခံ့ပြီး sexy ဖြစ်အောင်ဒေါက်ဖိနပ်အချို့ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူများပင်) ထည့်ပါ။
စိန်မိန်းကလေးတစ် ဦး ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်နာရီအနည်းငယ်ညသန်းခေါင်တွင်မီးရှူးမီးပန်းများကိုသင်မြင်နိုင်ရန်အပိုအနည်းငယ်ထပ်မံတည်ဆောက်ပါလိမ့်မည်။
ဒါဆိုမင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ ဤဆောင်းပါးကိုအခြားလူများဖတ်ရှုခြင်းမပြုမီ ၀ ယ်ယူပါ။
• £ 10 အောက်မှာအကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက် Santa ဆုလက်ဆောင်တွေကိုသင်ဒီခရစ်စမတ်ပွဲကိုသင်ဘယ်တော့မှမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး
• FOMO ကိုမစွန့်လွှတ်ပါနဲ့။ အခု Tab ရဲ့အလုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုစာရင်းသွင်းပါ။